प्रधानन्यायाधीश र प्रचण्डको अर्को काण्ड छताछुल्ल, राजनीति नै तरंगित — Imandarmedia.com
१एमालेमा चर्चित नेताहरु सामूहिक राजीनामा दिदै, को हुन् उनि ?
प्रधानन्यायाधीश र प्रचण्डको अर्को काण्ड छताछुल्ल, राजनीति नै तरंगित
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग गोप्य भेट गर्नुभएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुखमध्येका एक नेता प्रचण्डले बुधवार साँझ प्रधान न्यायाधीश जवरासँग बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै एक्लै भेटबार्ता गर्नुभएको हो।
सुरक्षास्रोतले दिएको जानकारीअनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सोही कम्पाउण्डमै रहेको प्रधानन्यायाधीशको निवासमा छिर्नुभएको थियो।
शीर्ष नेताको छलफलपछि प्रचण्ड एक्लै प्रधानन्यायाधीशको निवासमा जानुभएको थियो। स्रोतका अनुसार प्रचण्ड कात्तिक १५ गते माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईबिरुद्ध बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा हुने फैसलासहित सरकारले गर्ने सवै काममा न्यायालयको साथ चाहियो भन्दै प्रधानन्यायाधीश भेटन पुग्नुभएको हो।
अदालतमा अहिले पनि सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु विचाराधीन छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम गाँसिएको मुद्दाको फैसलाको मितिसमेत कात्तिक १५ गतेका लागि तोकिएको छ । सो मुद्दा राणा आफैंले हेर्नुभएको छ ।
यस्तै माधव नेपालसहित १४ जना सांसदमाथिको कार्वाहीको बिषयमा सभामुखले कानून बाहिर गएर लिनुभएको निर्णयको बिषय पनि अदालतमा बिचाराधीन रहेको छ । अदालतको पमादेशबाट बर्तमान सरकार बनेको कारण यो सरकारले गर्ने हरेक मामलाई न्यायालयले आँखा चिम्लिेर सहयोग गर्नुपर्ने।
र त्यसबापत आफुहरु प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको बिषयमा दह्रोसँग उभिने प्रस्ताव पनि प्रचण्डले राख्नुभएको स्रोतले बताएको छ। प्रचण्ड संबैधानिक अंगका नियुक्तिसमेत खारेज गरेर आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संबैधानिक निकायका नियुक्ति फेरबदल गर्दा अदालतले खारेज गर्ने बताउनु भएपछि अदालत म मिलाउँछु भन्दै प्रचण्ड प्रधानन्यायाधीश निवास जानुभएको स्रोतको भनाई छ।
यसै गरि , १० बुँदेको अब काम छैन् भनेर केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्री दिएको भोलीपल्ट नै घनश्याम भुसालले रोस प्रकट गरेका छन्। भुसाल लगायतले आोलीकै कडा प्रतिवाद गरेका हुन्। नेकपा एमालेको बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दश बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठेको छ।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा शुरू भएको बैठकमा दश बुँदे सहमति गरी एमालेमै रहेका नेताहरुले ओलीसँग जवाफ मागेका थिए ।
बागमती प्रदेश आयोजक कमिटीको बैठकमा बुधबार अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालले पार्टी नफुटाओस् भनेर मात्र १० बुँदे सहमति गरिएको भन्दै अब त्यसको एकतारे बजाइरहनुको अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर दश बुँदे गरिएको थियो । अब के दश बुँदे, दश बुँदे, दश बुँदे ?’, ओलीको भनाइ थियो।
बुधबार नै उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भूसालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । बिहीबार शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा भने नेताहरु रघुजी पन्त र घनश्याम भुसालले ओलीसँग जवाफ मागे ।
बैठकको शुरुमै पन्तले ओलीको उक्त अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘तपाईंले हिजो के बोल्नुभएको ? जुन कुरा कार्यान्वयन गर्नैपर्नेछ’, पन्तले सोधेका थिए । बैठक स्रोतका अनुसार, १० बुँदे सहमति गर्ने बेला ओलीले बोलेको कुरा समेत पन्तले सम्झाएका थिए।
‘माधव नेपाल नआए पनि म दश बुँदे कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको होइन ? तर अहिले माधव नेपालका लागि हो भन्न मिल्दैन’, पन्तको भनाइ थियो । दश बुँदे सदाकालका लागि नरहने, तर आउँदो महाधिवेशनसम्म कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने पन्तले बताए।
भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक रुपमा पार्टी विभाजित अवस्थामै रहेको भन्दै पन्तले त्यो भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक विभाजनलाई मेट्ने कामको अगुवाइ पनि ओलीले नै गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘पार्टीमा मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक विभाजन छ। त्यसलाई मेट्नुपर्छ। त्यो मेट्ने कुराको अगुवाइ पनि अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंले गर्नुपर्छ’, पन्तले भनेका थिए । पन्तले लामै समय बोलेपछि भने अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयनबारे भोलि (शुक्रबार) को बैठकमा छलफल हुने बताए।
तर विधान महाधिवेशनको समीक्षाका क्रममा भुसालले ओलीसँग फेरि केही प्रश्न गरे। भुसालले अध्यक्ष ओलीमा नवौं महाधिवेशनको धङधङी बाँकी नै रहेको टिप्पणी गरे । त्यो धङधङी अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको भुसालको आरोप थियो।
तपाईंसँग नवौं महाधिवेशनको धङधङी बाँकी नै छ, आग्रह र पूर्वाग्रह छदैछ’, भुसालले प्रश्न गरे, ‘यो कहिलेसम्म ? तर ओलीले भने आफूले कसैलाई पूर्वाग्रह नराखेको छोटो जवाफ दिए। बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले दश बुँदे कार्यान्वयनबारे शुक्रबारको बैठकमा छलफल हुने बताएका छन्।
‘केहीकेही ठाउँमा समस्या छ, इस्यूमा छलफल गर्छौं। राष्ट्रब्यापी रुपमा छलफल चलाइरहनु पर्दैन’ ज्ञवालीको भनाइ थियो ।गएको २७ असारमा १० बुँदे सहमति गरी माधव नेपालको पार्टीमा नगई स्थायी कमिटीका १० नेता एमालेमै बसेका छन्।
उक्त १० बुँदे सहमतिमा मूलतः पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ को अगाडिको अवस्थाबाट सञ्चालन हुने सहमति छ। तर सूदुरपश्चिम, बागमती र प्रदेश–२ का केही जिल्लामा सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
एमालेमा चर्चित नेताहरु सामूहिक राजीनामा दिदै, को हुन् उनि ?